WARBIXIN: Shaxda Kooxdii Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ugu Fiicnayd Qaybtii Hore Ee Xili Ciyaareedkan Ee Dhamaadkii Sanadkii 2017 Oo La Soo Saaray Iyo Xidigo Magac Wayn Leh Oo Shaxdan Iska Dhex Waayay. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Shaxda Kooxdii Shanta Horyaal Ee Yurub Ugu Waa Wayn Ugu Fiicnayd Qaybtii Hore Ee Xili Ciyaareedkan Ee Dhamaadkii Sanadkii 2017 Oo La Soo Saaray Iyo Xidigo Magac Wayn Leh Oo Shaxdan Iska Dhex Waayay.
January 2, 2018 Mahamoud Batalaale
Waxaa soo dhamaaday sanadkii 2017 oo waxyaabo badan loogu xusuusan doono kubbada cagta aduunka, waxaana jiray dhacdooyin waa wayn, kooxo waa wayn oo guulo waa wayn gaadhay, ciyaartoy bandhigyo fiican sameeyay iyo kulamo taariikhi ahaa oo la soo ciyaaray. Waxyaabihii ugu xusuusta badnaa waxaa ka mid ah in Real Madrid ay noqotay kooxdii ugu horaysay ee difaacatay koobka UEFA Champions League, waxaa ka mid ahaa guushii Barcelona ee Camp Nou ee ay PSG 6-1 ugu xasuuqday iyada oo noqotay kooxdii abid ugu horaysay ee guuldaro 4-0 ah ka soo kabsatay.
Haddi kuwaasi xusuuso fiican yihiin waxaa kale dhacdooyinkii ugu waa waynaa ka mid ahaa in Juventus ay guuldaro 4-1 ah finalkii Champions League ay kala kulantay Real Madrid, in Arsenal ay markii ugu horaysay muddo 18 sano ah ay seegtay u soo bixitaanka Champions League iyo dhacdooyin kale oo badan.
Laakiin marka uu sanadku dhamaado waxaa la sameeyaa dib u eegis iyo qiimayn gaar ahaan ciyaartoydii ugu bandhga fiicnayd, waana ta aanu doonayno in halkan ay shabakada Gool24.net idiinku soo gudbiso. Sidii aan soo sheegnay ciyaartoy aad u badan ayaa sanadkii galbaday ee 2017 bandhig wayn sameeyay, iyada oo waliba ay soo baxeen xidigo si layaableh iskugu muujiyay heerka kubbada cagta ugu saraysa.
Haddbaa shabakada caalamiga ah ee Goal.com ayaa soo saartay shaxda kooxda ilaa hadda ugu fiican tartamada Yurub gaarhaan shantii bilood ee ugu danbeeyay sanadkii dhamaaday ee 2017 oo uu xili ciyaareedkan 2017/18 uu soo socday. Qiimayntan ayaan ku salaysnayn magaca wayn ee ay ciyaartoydu leeyihiin balse waxa uu ku salaysan yahay xogta iyo xidigaha ugu bandhiga fiicnaa dhamaadkii sanadkii 2017 oo ah waqtigii la soo ciyaaray qaybtii hore ee xili ciyaareedkan.
Haddaba aan ku bilawnee waxaa shaxda kooxda ilaa hadda xili ciyaareedkan ugu fiican tartamada Yurub ee shabakada Goal ku jira David De Gea waxaana qormada doorashada De Gea lagu sheegay in aan la qiyaasi karin halka ay Man United ku jiri lahayd hadii ayna haysan De Gea ama aanu samayn lahayn bandhiga uu soo sameeyay shantii bilood ee ugu danbeeyay 2017 ee qaybtii hore ee xili ciyaareedkan.
Waxaa difaaca midig loo soo doortay ma gaboobe Dani Alves kaas oo ay kooxda Paris Saint-Germain ka hor qaaday Manchester City suuqii xagaagii la soo dhaafay wuxuuna wali xidiga ree Brazil muujinayaa in uu ka mid yahay difaacyada midig ee ugu fiican isaga oo min Sevilla, Barcelona, Juventus ilaa PSG oo hadda joogo wax qabadkiisa ku muujinaya.
Booska difaaca dhexe waxaa ku jira xidig ay suurtogal tahay in ay dad badan layaab ku noqoto balse bandhigiisa ku helay in uu shaxdan ka soo muuqdo, waana Martin Skriniar kaas oo si layaableh Inter Milan uga caawinaya in ay dib ugu soo laabto booskii ay ku lahayd horyaalka Talyaaniga iyo tartamada yurub.
22 sano jirkan u dhashay dalka Slovakia ayaa hore iskugu soo muujiyay kooxda Sampdoria laakiin waxa uu Inter Milan u leeyahay muhiimada Mouro Icardi oo kale sida lagu xusay warbixinta shaxdan lagu qiimeeyay wuxuuna sabab wayn ku leeyahay horumar wayn ee ay Inter Milan xili ciyaareedkan samaynayso ee ay horyaalka Serie A ugu tartamayso.
Difaaca dhexe ee labaad waxaa isna ku jira Gerard Pique si joogto ah uga soo muuqday difaaca dhexe ee kooxda Barcelona kaas oo lagu sifeeyay mid ka mid ah difaacyada dhexe ee Yurub layskugu halayn karo bandhigooda, wuxuuna Pique qayb ka ahaa difaaca Barcelona oo hal gool oo kaliya looga soo dhaliyay Champions League isla markaana 7 gool oo kaliya looga dhaliyay horyaalka La Liga.
Difaaca bidix waxaa ahntiyay Philipp Max oo ka tirsan kooxda Augsburg ee horyaalka Germany kaas oo kaalinta kowaad kaga jira gool caawinta horyaalka La liga ee xili ciyaareedkan wuxuuna soo sameeyay 9 gool caawineed halka uu wuxuuna ku lug lahaa saddex meelood meel goolashii ay kooxdiisu soo dhalisay, wuxuuna 24 sano jirkani jeex -jeexay garabka bidix ee kulamadii uu soo ciyaaray.
Waxaa khadka dhexe ee shaxdan ku soo baxay kubbad sameeyaha layaabka leh ee xulka qaranka Spain iyo kooxda Manchester City ee David Silva kaas oo qaybtii hore ee xili ciyaareedkan wacdaro layaableh ka soo dhigay.Shantii bilood ee dhaamaadkii sanadkii 2017 waxa uu Silva sabab wayn u ahaa in City ay ku soo jirtay rekoodhka guuldaro la’anta ee ay ilaa hadda sii wado, wuxuu soo dhaliyay 5 gool wuxuuna soo caawiyay 10 gool laakiin wax qabadkiisa guud ayaa intaas ka badan.
Waxaa sidoo kale khadka dhexe ee shaxdan ku soo baxay xidigii markii hore loo yaqaanay Flopp-kii Liverpool balse ilaa hadda xili ciyaareedkan wacdaro cusub la soo baxay waana Luis Alberto oo si layaableh bandhig uga soo sameyay kooxda Lazio ee horyaalka Talyaaniga.
Haddii aad aragtay Iago Aspas oo kooxda Celta Vigo dilaa ku noqday oo ay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ka cabsadaan waxay mar isag iyo Luis Alberto ku soo wada fashilmeen Liverpool balse markan xidiga ree Spain ee Alberto ayaa ka soo muuqday shaxda ilaa hadda Yurub ugu fiican.
Waxaa saddexda khadka dhexe ee shaxda kooxda ilaa hadda xili ciyaareedkan ugu fiican buuxiyay Kevin De Bruyne oo ah halbawlaha kooxda Manchester City kaas oo muujiyay in uu waayihiisa ciyaareed heer kale u qaaday. De Bruyne oo ka mid ahaa xidigihii Chelea laga nacay ee ku fashilmay ayaa hadda loo arkaa mustaqbalka kubbada cagta wuxuuna si shaki la’aan ah kaga soo muuqday kooxda ilaa hadda xili ciyaareedkan Yurub ugu fiican.
Garabka midig ee weerarka shaxda kooxda ilaa hadda Yurub ugu fiican waxaa ku jira xidiga layaabka dhigaya ee kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah. Salah ayaa shantii bilood ee ugu horaysay waayihiisa ciyaareed ee Liverpool waxa uu sida cadceeda uga soo ifbaxay Premier league iyo tartamada Yurub.
Mohamed Salah ayaa 22 gool ugu soo lug lahaa Liverpool ee tartanka Premier League waana 17 gool oo uu soo dhaliyay iyo 5 gool caawin oo uu sameeyay isaga oo waliba seegay kulankii ugu danbeeyay isla markaana uu Klopp waqtiyo badan badal ku saaray ama uu kaydka ku nasiyay. Salah ayaa isna si shaki la’aan ah shaxda ugu soo muuqday.
Waxaa garabka bidix ee weerarka shaxdan ugu soo baxay da’yarka sanadkii 2017 aduunka ka soo yaabsaday ee Kylian Mbappe kaas oo muddo kooban ku noqda xidig aduunka oodhan wax qabadkiisa lag dareemay. Isaga oo 18 sano jir ah ayuu ka waxtar badnaaday xidigo magac wayn ku leh kubbada cagta, wuxuuna hadda noqday 19 sano jir door wayn ka ciyaaraya horumarka kooxda xagaagii heshiiska 180 ka milyan ee euros kula soo wareegtay ee Paris Saint-Germain.
Mbappe ayaa ayaa 8 gool ka soo dhaliyay horyaalka France laakiin wax qabadkiisa iyo gool caawintiisa horyaalka France iyo tartamada Yurub ayaa ah mid ka dhigtay xidig khaas ah isla markaana loo arko mid ka mid ah xidigaha noqon doona wajiga hore ee mustabalka kubbada cagta aduunka.
Ugu danbayn waxaa shaxdan dhamaystiray Harry Kane oo sanadkii dhamaaday ee 2017 noqday xidigii ugu goolasha badnaa laakiin sidoo kale xidiga ree England ayaa qaybtii hore ee xili ciyaareedkan muujiyay sida uu u yahay mishiinka gool dhalinta Premier league isaga oo 18 gool soo dhaliyay wuxuuna sanadkii 2017 jabiyay rekoodh uu Allan Shearer soo haystay muddo 22 sano ah.
Harry Kane iyo Mbappe ayaa booska kala baxay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo sidi looga bartay waqtigan oo kale ku soo bixi jiray qiimayn kasta oo la sameeyo. Sidoo kale Mohamed Salah ayaa ka soo hor maray xidig kasta oo kale waana shaxda kooxda ilaa hadda Yurub ugu fiican iyo qaybtii danbe ee sanadkii 2017.
Haddaba halkan kaga Bogo Shaxda dhan Oo Dhamaystiran Iyo Kooxaha Ay Ciyaartoydani Ka Tirsan Yihiin:
David de Gea- Man United
DIFAACA MIDIG: Dani Alves-PSG
DIFAACA DHEXE: Martin Skriniar-Inter Milan
DIFAACA DHEXE: Gerard Pique-Barcelona
DIFACA BIDIX: Philipp Max-Augsburg
KHADKA DHEXE: David Silva- Man City
KHADKA DHEXE: Luis Alberto-Lazio
KHADKA DHEXE: Kevin De Bruyne- Man City
GARABKA MIDIG: Mohamed Salah- Liverpool
WEERARKA DHEXE: Harry Kane- Tottenahm
GARABKA BIDIX: Kylian Mbappe- PSG
Haddaba akhriste, adiga ahaan shaxdani ma tahay shaxdii ugu fiicnayd qaybtii hore ee xili ciyaareedkan ee shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn? Haddii ayna sax kuula muuqan adiga oo khibradada iyo xogta aad hayso kaashanayaa siday noqon lahayd shaxda aad u soo xulan lahayd kooxda ilaa hadda shanta horyaal ee Yurub ugu fiicani?.
mararka qaar marka la sameyo shaxda ugu fiican waxaa la sugi donaa yaa ku soo bixi doona lkn shaxdaan waa mid aan suuragal aheen maxaa yeelay afka hore saddexda weraryahay waa mid aad loogu qaldamay waxa uu ahaay in la isla geeno neymar,messi,kmabbpe wa hadii la fiiricyo cadalad hary kean waa dhaliye lkn aan xirfad laheen
shaxdaan gabi ahaanbo waaqalad
aleves pique Umtiti philip max dhexda Silva bolinho De bruyne werarka leo harry kane m. salan
cabdiraxman burcaawi says:
maya maya cr7 iyo messi paapa k maqan zideepy macquul ku tahay
K.navas paa xita u qalma pooskaa goolhayyaha iyo buffon
zideedapa hal poooz oo cadalada lagu zaleeyay mahyo
zalah intuu dhaliyo intuu cuna k padan markazy garap zaareen waa qiyaamihi
king farah says:
anigu fikradayda waa
Hassan Abdikadir says:
Fikrad ahaantayda 4-3-3
De Bruyne David Silva
waxaaas shax maaha dadki abaal marinaha ugu waa wayn ku guulaystay baa kamaqan
Guled simba says:
Kaabihi barca odaygi messi mesha mA iga herde secml
Messi laanti shaxda mA nuurayso
Axmed yasin are says:
afka hore messi m.salah labada
hogaaminay gool dhalinta iyo ciyaar wanaaga labada horyaal ee ugu waaweyn iyo h.kane
Shaxdu waa inay noqoto
Degea, Asplicueta, Ramos, Martin Skiriniar, Alves, Kante, Debruyne,Hazard, Messi iyo Salah
Eden Hazard Oo Dhaleeceeyay Booskii Uu U Adeegsaday Tababare Antonio Conte Kulankii UEFA Champions League-ga Ay La Ciyaareen Kooxda Barcelona.
DAAWO: Lionel Messi Oo Joojiyay Tababarkii Maanta Si Uu Ousmane Dembele Sacabka U Tumay Iyo Gerard Pique Oo Maanta Seegay Tababarkii Barca.
In Real Madrid Ay Reebi Doonto PSG, Sababta Ayna Los Blancos Horyaalka La Liga Ugu Fiicnayn, In Zidane Uu Shaqadiisa Dhamaystiri Doono Iyo Robert Pires Oo Arimo Kala Duwan Ka Hadlay.